Skype တွေ့ဆုံမှုယခုမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများအတွက် Zoom အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည် Gadget သတင်း
အဆိုပါလေးဆယ်၏အစအ ဦး ကတည်းကအသုံးပြုခြင်း ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအက်ပ်များ တိုးပွါး။ များပြားကြ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ဖို့အနီးဆုံးအရာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှသောသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ချစ်သောစီးရီးများ (သို့) သူငယ်ချင်းများသာမကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည် အိမျကနေအလုပ်.
WhatsApp ကို, Facebook က Messenger ကို, Hangouts, Skype, Zoom, Houseparty ... အသုံးအများဆုံး application တွေဖြစ်တယ်။ ဤအပလီကေးရှင်းများအနက်ဤအနှစ် ၄၀ အတွင်းအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့သည့် Zoom သည်သုံးစွဲသူ ၁၅ သန်းရှိရာမှသန်း ၂၀၀ ကျော်သို့တိုးတက်သွားခဲ့သည်။ ဒီပလက်ဖောင်းအပေါငျးတို့သချို့ယွင်းချက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်
1 Zoom ဟာဘာကြောင့်လူကြိုက်များလာတာလဲ။
2 Zoom သည်အဘယ်ကြောင့်တရားဝင်ရွေးချယ်စရာမဟုတ်တော့သနည်း။
3 Skype နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
4 Skype Meet Now ကို သုံး၍ ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်နည်း
4.1 စမတ်ဖုန်း / တက်ဘလက်မှ
5 Meet Now သုံး၍ ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကိုရယူရန်လိုအပ်ချက်များ
6 ယခုအစည်းအဝေးများ - Skype Group Chat
Zoom သည်၎င်းကြောင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ရန်အသုံးအများဆုံး application ဖြစ်လာသည် အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်၊ ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတခုကို ၀ င်ရောက်ဖို့လင့်ခ်တခုကိုနှိပ်ရုံသာဖြစ်ပြီး၊ လူ ၄၀ ဦး အထိတူညီတဲ့ခေါ်ဆိုမှုမှာအခမဲ့ပါ ၀ င်နိုင်တယ်။
Zoom ကိုတည်ထောင်သူ Eric Yuan ကဤ ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်ကိုသူဖန်တီးခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းကိုကမ်းလှမ်းပါရိုးရှင်းသော link တစ်ခုမှတဆင့် zoombombing ကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ တတိယပါတီများမှဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အတွက်ပါ ၀ င်သူများကိုစော်ကားခြင်း၊
မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်းက Zoom သည်ကုမ္ပဏီများနှင့်ယခုတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည့်အပြင်၊ ၎င်း၏အသုံးပြုသူများ၏ privacy များအတွက်ကြီးမားသောပြproblemနာ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက် applications များနှင့်ဆက်သွယ်မှုများကို encrypt လုပ်ဖို့အသုံးပြုတဲ့လုံခြုံရေး protocols များနှစ် ဦး စလုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည့်လုံခြုံရေးအားနည်းချက်များကိုကြောင့်။
အမေရိကန်အစိုးရအပြင်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုမ္ပဏီများနှင့်ပညာရေးစင်တာများအားအတားအဆီးဖြစ်စေသောလုံခြုံရေးပြproblemနာကိုဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများတွင်တွေ့ရသည်။ ဆာဗာပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲပေးပို့သူနှင့်လက်ခံသူအကြားစာဝှက်ပေးသောဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၀ န်ထမ်းတိုင်းသည်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအားလုံးကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
၀ ါရှင်တန်ပို့စ်၏အဆိုအရဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများတွင်လုံခြုံမှုကင်းမဲ့ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ထောင်ပေါင်းများစွာသော Zoom မှတ်တမ်းများကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှာဖွေပါဤအမည်များကို (ယုတ္တိနည်းအရ၎င်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုဖော်ပြခြင်းမရှိ) ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသောကြောင့်မည်သူမဆို download ပြုလုပ်၍ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ဒီပြproblemနာအတွက် iOS application ကတင်ပြတဲ့တစ်ခုထပ်ထည့်ရမယ် အသုံးပြုသူနှင့်စက်ပစ္စည်းဒေတာစုဆောင်း Facebook Graph API ကိုသုံးပြီးကျွန်ုပ်တို့ Facebook အကောင့်ကို log in လုပ်ဖို့တောင်မှ။ Motherboard မှထုတ်ဝေသောဆောင်းပါးအပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။
ရက်အနည်းငယ်ကြာသော်အခြားလုံခြုံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတစ် ဦး က Mac နှင့် Windows အတွက် installer သည်အသုံးပြုသူများအားခွင့်ပြုချက်မတောင်းဘဲ script များကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လျှောက်လွှာစနစ်ကအခွင့်ထူးရယူ။
ဤလုံခြုံရေးပြproblemsနာများသည် Zoom ကိုအသုံးပြုခြင်းအားရပ်တန့်ရန်သင့်အတွက်အကြောင်းပြချက်များလုံလောက်မှုမရှိပါက၊ ဆက်ဖတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် အကယ်လို့မင်းရဲ့ privacy ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုရင်၊ Microsoft မှသူတို့သည် Zoom ကဲ့သို့တူညီစွာအလုပ်လုပ်သော Meet Now ကိုစတင်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ဤဝန်ဆောင်မှု၏နောက်ကွယ်ရှိမိုက်ကရိုဆော့မှကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်လုံခြုံရေးနှင့်အတူ။
Skype ကိုယခုတွေ့ပြီ အတိအကျ Zoom ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသောတူညီသောအရာလုပ်ပေးသည်သို့သော်ဤကဲ့သို့သောအချက်များနှင့်မတူဘဲအသုံးပြုသူ၏လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံမှုသည်ကာကွယ်ပေးရုံထက်မကသောဤဝါရင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု ၀ န်ဆောင်မှုနောက်ကွယ်မှကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သော Micrososft ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အုပ်စုလိုက်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကိုရယူရန်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် (ကွန်ပျူတာများတွင်မလိုအပ်ပါ) application ကို install လုပ်ရုံဖြင့် link ကိုနှိပ်ပါ။
Zoom နှင့်မတူပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာပေါ်တွင်လျှောက်လွှာကိုတပ်ဆင်သောအခါ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်တွန်းအားပေးသည်၊ Meet Now ကိုအသုံးပြုရန်။ Skype အကောင့်ဖွင့်ရန်မလိုအပ်ပါ (Windows 10 တွင်အသုံးပြုသောအကောင့်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြီးပြည့်စုံသော်လည်း) application ကို guest mode ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျနော်တို့စကားပြောဆိုမှုတစ်ခု join ဖို့ link ကို click လုပ်တဲ့အခါသူကရိုက်ထည့်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုမေးပါလိမ့်မယ် ငါတို့နာမည်, ငါတို့ပုံရိပ်ဘေးမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်, ပြီးတော့လူတွေကငါတို့နာမည်နဲ့ခေါ်လို့ရတယ်။
Skype Meet Now ကို သုံး၍ ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်နည်း
စမတ်ဖုန်း / တက်ဘလက်မှ
Zoom ကဲ့သို့ပင်ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန် iOS နှင့် Android နှစ်ခုလုံးအတွက်တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်၊ ဟုတ်သည်သို့မဟုတ်ဟုတ်ပါသည်၊ အစည်းအဝေးခန်းတစ်ခုဖန်တီးပါ။ ကျန်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်၎င်းကိုချိတ်ဆက်ရန် link ကိုနှိပ်ရုံသာဖြစ်သည်။
နောက်ကိုလိုက်ရန်ခြေလှမ်းများ Skype တွေ့ဆုံယခု သုံး၍ ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပါ:
ကျွန်တော်တို့ application ကိုဖွင့်ပြီး Microsoft account ဖြင့် log in လုပ်သည် (ကျွန်ုပ်တို့၏ Windows ပထမကွန်ပျူတာနှင့်အသုံးပြုသည်မှာမှန်ကန်သည်)
ပြီးရင်ခဲတံသေးသေးလေးကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ application ရဲ့အပေါ်ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုမည့်ကင်မရာ၏ပုံရိပ် (စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်စားပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါကရှေ့နောက်နောက်သို့) ပြသသောအခါ၊ ကိုနှိပ်ပါ ဖိတ်ကြားချက်ဝေမျှပါဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတွင်ပါ ၀ င်မည့်သူများအားဤ link ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့သည်။
link ကိုလက်ခံရရှိသူများသည်စမတ်ဖုန်း (သို့) တက်ဘလက်တစ်ခုသာဖြစ်လျှင်ယခင် application ကိုသာထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, Skype ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ငါတို့သုံးလိုပါကကျွန်တော်တို့ကိုမေးပါလိမ့်မယ် လျှောက်လွှာ၏ Guest ည့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Guest ည့်သည်ကိုနှိပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အမည်ကိုရေးသည်၊ အစည်းအဝေး / ခေါ်ဆိုမှုတွင်ပါ ၀ င်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုပါက၊ ထိုအရာသည်ပိုမိုလွယ်ကူပြီး၊ ယခုအစည်းအဝေးများဖန်တီးရန် Skype ဝဘ်, ဒီ link ကတဆင့်၀ န်ဆောင်မှုကိုလိုချင်သူအားလုံးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဝေမျှရမည့်အစည်းအဝေးခန်း၏ link ကိုဖန်တီးပါ။ Windows ရှိသည့်ရရှိနိုင်သည့် application ကို download လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့မဟုတ် macOS, အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ application နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိပါက၎င်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ browser ကို Skype မှတစ်ဆင့် video conference ပြုလုပ်ရန်အတွက်၎င်းသည် Chrome ဖြစ်ရမည်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ Edge o အခြားမည်သည့်ခရိုမီယမ် -based browser ကို (Brave, Opera, Vivaldi …) ။
Meet Now သုံး၍ ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကိုရယူရန်လိုအပ်ချက်များ
ဤခေါ်ဆိုမှုဝန်ဆောင်မှုအသစ်ကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည်မှာဟုတ်သည် (သို့) ဟုတ်ပါသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာတွင် Skype application ကိုထည့်သွင်းထားသည်ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့မှာ Microsoft အကောင့်ရှိရင် (@outlook, @hotmail, @ msn ... ) လျှောက်လွှာကိုဝင်ဖို့မလိုပါဘူး
Meet Now မှတစ်ဆင့် Skype ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောအုပ်စုလိုက်ခေါ်ဆိုမှုများကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်၊ သူတို့ကိုဖန်တီးသည့်အခါအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ browser သည် Google Chrome၊ Microsoft Edge သို့မဟုတ် Chromium ကိုအခြေခံသောအခြား browser တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဤ browser များမရှိလျှင် link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Skype ကို download လုပ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ browser တွင်မည်သည့် installer ကိုမျှမတပ်လိုပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် install လုပ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်ဟာ Windows 10 အသုံးပြုသူများနှင့် အကယ်၍ သင်သည်ဤ operating system ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းရှိပါက၊ Chromium အခြေစိုက် Microsoft Edge ကိုသတိရသင့်သည်။ ၎င်းကိုသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သာတပ်ဆင်ထားသည်.
ယခုအစည်းအဝေးများ - Skype Group Chat
Skype အုပ်စုစကားပြောခြင်း၊ ၄ င်းတို့သည် Skype မှကျွန်ုပ်တို့အမြဲသိသောဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည်အစမှအလိုလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အုပ်စုအမည်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးစကားဝိုင်းဖန်တီးသောအခါပါဝင်သူများကိုအစမှရွေးချယ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ကွန်ပြူတာများ » Skype တွေ့ဆုံယခုအလုပ်လုပ်ပုံ - ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများအတွက် Zoom အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာ